Gini mere ogwe osisi aluminom ji ewu ewu? Kedu uru ya？
1.High weather resistance.ACP n'agbanyeghị na elu okpomọkụ nke anyanwụ ma ọ bụ ala okpomọkụ snow ụbọchị agaghị apụta eke mmebi, n'ozuzu a na ikpe a pụrụ iji afọ iri na-enweghị fading。For atụ, e nweghị ike ìhè irradiation, enweghị oke okpomọkụ, ma ọ nwere ike ịbụ m ...
Ka na-eji plywood etolite eji arụ ụlọ? Akwụkwọ Aluminom: out gafeela ụbọchị
Aluminom formwork bụ emana anọ formwork mgbe plywood formwork, nchara formwork, na plastic formwork. N'iji ya tụnyere ọgbọ ndị gara aga, ọ nwere uru nke ịdị arọ dị nfe, nnukwu nkwụsi ike, na nnukwu reusability. Igwe aluminom nwere oke dị arọ n'etiti exis ...
Mata Ọdịiche dị iche iche nke ringlock scaffolding na mma ringlock scaffolding
Sclock Scoldolding nwere njirimara nke ike dị ukwuu, arụmọrụ dị elu, ikike ebu ike, nchekwa na ntụkwasị obi, ọ dịghịkwa mfe ịme nsogbu n'oge eji. Loadingkwanye na ibudata dị mfe ma dị mma, ma dị mma maka nchekwa. Uru ndị a na-eme ka ringloc ...
Omume nke mgbanaka mgbanaka adịlarị anya, a na-atụkwa anya na ọ ga-agabiga ijeri yuan 170 na 2027!
Ikwu okwu banyere ịpị ringlock, usoro mmepe ya adịla mbụ. Ugbu a, ọtụtụ ógbè na obodo ẹkenam atumatu iji mejuputa ringlock scaffolding, gụnyere Beijing, Shanghai, Shenzhen, Jiangsu, Hubei, wdg, anya ụdị ringlock scaffolding na-agbụ na Ọ na ọtụtụ-eji t ...
Nkọwapụta maka erection nke scackoldolding ringlock, atụmatụ ụlọ nke ringlock scaffolding! Ihe injinia ndị mmadụ kwesịrị ịma!
Tupu iwube mkpọchi mgbanaka, a ga-ahazigharị atụmatụ mwube a ga-ahaziri. A na-ahazi atụmatụ ihe owuwu ahụ dịka nkọwapụta nke scalockolding ringlock. Ka anyị lee ụfọdụ isi ihe na nkọwapụta nke ringlock scaffolding. Na tupu ...
Nrụgide oru Ringlock Scaffolding, Kemeghi Building Steel Props, Kwikstage Scaffolding Ngwa, Ringlock Scaffolding mgbodo, Scaffolding Kemeghi ịghasa Jack, Akụkụ Ulo olu nke Ringlock,